အိုဘားမားကိုဖတ်ရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပြုသောစာအုပ်များ eReaders အားလုံး
အိုဘားမားစာဖတ်ခြင်းအားထောက်ခံအကြံပြုသော Trump စာအုပ်နှင့်ဘယ်တော့မှဖတ်ပါလိမ့်မယ်သော 11 စာအုပ်တွေ
သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမား သူဟာစာဖတ်တတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်ကြိမ်ထက်မကသူပြခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့သူ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းသူပြောခဲ့တာကို ငါ့အဘ၏အိပ်မက်များသူသည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သူအလုပ်မလုပ်ကြောင်းပြောပြရာသူသည်သူ၏အဖော်များစာအုပ်များရှိသည့်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်အနားယူသည်။ ယခုသမိုင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် စာပေနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏အရသာကိုတစ်ဖန်ပြသခဲ့ပြီးစာအုပ် ၁၁ အုပ်ကိုထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သည်.
ဤစာအုပ်များကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က New York Times မှဝေဖန်ရေးဆရာ Michiko Kakutani နှင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားဟာမကြာသေးခင်ကမှဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကိုဖတ်ဖို့အကြံပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သမ္မတ Trump အသစ်သည်၎င်းတို့ထဲမှမည်သည့်စာဖတ်မည်မမူကိုအချို့သောဆိုးသွမ်းမှုများဖြင့်မေးခွန်းထုတ်သည်။
ဘရက်ခ်အိုဘားမား၏ပထမဆုံးထောက်ခံချက်မှာ စစ်သည်မိန်းမတစ် ဦး အလုပ် Maxine Hong Kong တရုတ်အမျိုးသမီးနှင့်အာရှဒဏ္,ာရီများ၊ တရုတ်မိသားစုများနှင့်သူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၏ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဘဝ၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ထင်မြင်ချက်အမြောက်အများပါသောအမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။
အထီးထီးနေခြင်း၏တရာနှစ် ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့စာပေ၏ဂန္ထဝင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတဟောင်းသည်သူ၏စာအုပ်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မလိုပါ။ Gabriel GarcíaMárquezသည်ဤစာအုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးBuendía-Iguaránမိသားစု၏ထူးခြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။.
၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အရောင်းရဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီးဘာသာစကားများစွာဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသည်။ ၎င်းသည်နိုဘယ်ဆုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် သေခြင်းတရားအကြောင်းကြိုဟောထားသည် o ငါ၏အဝမ်းနည်းဖွယ်ပြည့်တန်ဆာများ၏မှတ်ဉာဏ်.
အနည်းဆုံးတော့စာပေနှင့်ပတ်သက်လျှင်တရုတ်သည်အိုဘားမား၏ကြီးမားသောအကျိုးစီးပွားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါနမူနာတစ်ခုကအလုပ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်သုံးခုပြproblemနာ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌သိပ္ပံပညာ၏အခန်းကဏ္exposedကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းက၎င်းသည်အတိတ်ကဖြစ်ပျက်မှုများနှင့်အနာဂတ်အာရှအနာဂတ်တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားများစွာနားလည်စေပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမား၏ရွေးချယ်မှုသည်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဤစာပေကိုစာပေ၏ကျန်ရှိနေသောမဟာကျွမ်းကျင်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်သာမန်စာဖတ်သူများစွာထံမှအလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များရရှိခဲ့သည်။
၏အကောင်းဆုံးလူသိများအလုပ် Lauren groff ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါ Lotto နှင့် Mathilde တို့၏နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်အကြားစိတ်အားထက်သန်မှုပုံပြင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိရန်ခဲယဉ်းခြင်းမရှိဘဲလက်ထပ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အချိန်ယူကြသူ၊ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ပြင်းထန်သောအဖြစ်မှန်မှာပုံပြင်တိုင်းတွင်ပြောရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပြီး၎င်းသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
အိုဘားမား၏အာဖရိကအမြစ်များသည်သူကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ဤစာအုပ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ပျက်ကွက်။ မရပါ မြစ်ထဲမှာကွေးမူဝါဒများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအာဖရိကနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးရုန်းရင်းဆန်ခတ်အခြေအနေတွင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘ ၀ များတွင်အဓိကဖော်ပြထားသည်။
သေချာပါတယ် ဒါကငါဘရက်ခ်အိုဘားမားရဲ့ထောက်ခံချက်ပဲငါကတခြားသူတွေအားလုံးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ Gillyan Flyan ရေးတဲ့ဒီဝတ္ထုကသင့်ကိုပထမဆုံးအချိန်ကနေချိတ်ဆက်ပေးပြီးသင်မဖတ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။
ဆော်လမွန်သီချင်း Toni Morrison မှအိုဘားမား၏နောက်ထပ်အကြံပေးချက်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးတွင်အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းများလှမ်းပြီးလူဖြူလူ့ဘောင်သို့ပေါင်းစည်းရန်သူ၏ဇာစ်မြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောအမျိုးသားမိသားစုအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နှင့်ခြောက်ဆယ်များ၏အနက်ရောင်စုရုံးနေထိုင်ရာ၏ကြမ်းတမ်းအဖြစ်မှန်များအကြားရောနှော။ ဤအချက်နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတဟောင်းသည်များစွာသောလူများကိုမေ့သွားပုံရပြီးသမိုင်းကြောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမှာမြောက်အမေရိကနိုင်ငံ၏ပတ် ၀ န်းကျင်အချို့တွင်သာမကကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်၌တည်ရှိသည်။
ဝတ္ထုသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးရရှိခဲ့သောဝေဖန်မှုအချို့ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် အဝတ်အချည်းစည်းနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ဤစာအုပ်၏အမျိုးအစားကိုနားလည်နိုင်သည်။ ဤရာစုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သောအကောင်းဆုံးစစ်ပွဲဝတ္ထုအဖြစ်လူအများကသတ်မှတ်ပြီးစာရေးဆရာ Norman Mailer အား Tolstoy နှင့် Hemingway တို့၏အမြင့်တွင်နေရာချကာကျွန်ုပ်တို့စတင်မည့်စွန့်စားမှုကိုလျင်မြန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။
Mailer ၏သူရဲကောင်းများသည်ဤဝတ္ထု၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကြသည် အိုဘားမားလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့သင်တို့လည်းသင်ဝယ်ယူရန်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံးထက်ကျော်လွန်ရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။
မြေအောက်ရထားလမ်း ၎င်းသည်မည်သည့်စာအုပ်မျှမျှသာမဟုတ်ပါ Colson Whitehead ကိုဒီစာအုပ်အတွက် Narrative ဆုအတွက်ယူ။ အက်စ်။ အမျိုးသားအမျိုးသားဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ၁၉ ရာစုတွင်ကျွန်စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤစာအုပ်၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ် သင့်နှလုံးကိုတုန်ခါစေမည့်မိန်းမငယ် Cora ပြီးတော့သူမအမေနဲ့အတူစိုက်ခင်းတစ်ခုမှာကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့နေရာ၊ သူ့အမေထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာကနေကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမကိုအထီးကျန်ဆုံးနေရာမှာထားခဲ့တယ်။
ဖန်တီးမှုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းပြproblemsနာများစာရေးဆရာများများအတွက်အသုံးအများဆုံးပြproblemsနာများဖြစ်ကြသည်။ Dorsi Lessing ပြောသောဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ အတိအကျဖြစ်သည် ရွှေမှတ်စုစာအုပ်စာရေးသူ Anna Wulf သည်ဤပြproblemနာနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
စာရေးသူ Anna Wulf ဆိုသည့်အနက်ရောင်မှတ်စုစာအုပ်၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်အနီရောင်မှတ်စုစာအုပ်၊ ငါအတွေ့အကြုံကနေလာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ဒိုင်ယာရီဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အပြာမှတ်စုစာအုပ်တွေရေးတတ်တဲ့အဝါရောင်၊
ဒီစာရင်းကိုပိတ်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတဟောင်းကကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့အကြံပြုတယ် ဂိလဒ်ပြည်ဝတ္ထု၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းတစ် ဦး ၏ အိုင်အိုဝါရှိမြို့ငယ်လေးတစ်ခုသည်အရာရာတိုင်းကိုပုံမချနိုင်သည့်အပြင်အပြိုင်အဆိုင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိသည်.
Pulitzer ၂၀၀၅ နှင့် National Book Critic Circles Award တို့ဖြင့်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်ဤအလုပ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သာမကသူမ၏စာပေများကိုဘာသာပြန်ထားသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သက်ဆိုင်ရာနှင့်အကျော်ကြားဆုံးစာရေးဆရာများအနက်မှမာရီလင်ရော်ဘင်ဆင်ကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအရေအတွက်သို့။
ဘားရက်အိုဘားမားအကြံပြုထားတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဘယ်အလုပ်တွေကိုခင်ဗျားဖတ်ပြီးပြီလဲ၊ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီလဲ။။ ဤ ၀ င်ရောက်မှုမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုရမ်၌ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » အိုဘားမားစာဖတ်ခြင်းအားထောက်ခံအကြံပြုသော Trump စာအုပ်နှင့်ဘယ်တော့မှဖတ်ပါလိမ့်မယ်သော 11 စာအုပ်တွေ
Trump သူတို့အားထိုစာအုပ်များကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိငါမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်သူကသူ၏ကတိတော်များကိုအများစု (နှင့်သူတို့ကသူ့ကိုခွင့်ပြုလျှင်) ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်သူမခွဲခြားဘဲသူမည်သူပင်ယူနိုက်တက်စတိတ်၏သမိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသမ္မတဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Kindle Library မှ Free eBooks များကိုသင်၏ PC သို့ဘယ်လို download ချမလဲ